कुवेतबाट आइपुगे १५० नेपाली – Khabar Silo
कुवेतबाट आइपुगे १५० नेपाली
Posted on June 11, 2020 Author khabar silo Comment(0)
बिहीबार १५० नेपाली कुवेतबाट नेपाल आइपुगेका छन्।
रोजगारीको शिलशिलामा कुवेत पुगेका १५० जना नेपाली महिलाहरूलाई कुवेत सरकारले नेपाल पठाएको हो। उनीहरूलाई ल्याएर जजिरा एयरवेज एयरवेज ए३२० न्यारोबडी जहाज काठमाडौं आएको हो।
आजै अर्को जहाजबाट थप १५० नेपाली आउँदै छन्। आज नेपाल फर्किनेमा अधिकांश घरेलु महिला कामदार छन्।
सरकारले पछिल्लो समय विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई जहाजबाट नेपाल ल्याउने निर्णय गरेको छ।
यस्तो हुने छ उडान तालिकाः
सरकारको निर्णयअनुसार जेठ २९ गते कुवेतबाट दुई उडान हुने छन्। त्यस्तै जेठ ३२ मा बंगलादेश, असार १ मा माल्दिभ्स, मलेसिया, साउदी अरब, सिंगापुर, कम्बोडिया र ओमनबाट हुने छन्।
त्यस्तै, असार २ मा संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, कुवेत, श्रीलंका र माल्दिभ्समा उडान हुने छ। असार ३ मा अष्ट्रेलिया, थाइल्यान्ड, बहराइन, बंगलादेश, कतार र संयुक्त राज्य अमेरिकामा उडान हुने छ। असार ४ मा साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, मलेसिया र ओमन उडान हुने छ। असार ५ मा जापान, कुवेत, साउदी अरब र नाइजेरिया उडान हुने छ।
असार ६ मा साइप्रस, मलेसिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बंगलादेश र युरोपियन युनियनबाट नेपालीको उद्धार उडान हुने छ। असार ७ मा दक्षिण कोरिया, ओमन, कुवेत र मलेसिया तथा असार ८ मा अष्ट्रेलिया, थाइल्यान्ड, पाकिस्तान र कतार हुनेछ। असार ९ मा जापान, माल्दिभ्स, संयुक्त अरब इमिरेट्स र युगान्डा तथा असार १० मा साउदी अरब, कुवेत र असार ११ मा साइप्रस र इजरायल उडान गर्ने तालिका तय गरिएको छ।
उडान हुने ठाउँ
कुवेतमा (२ उडान)
माल्दिभ्स, मलेसिया, साउदी अरब, सिंगापुर/कम्बोडिया, ओमन
दुबई, कतार, कुवेत, श्रीलंका (कम्बोडिया)/ माल्दिभ्स
अष्ट्रेलिया, बैंकक, बहराइन, बंगलादेश, कतार, संयुक्त राज्य अमेरिका
साउदी(रियाद), दुबइ, मलेसिया, ओमन
जापान(नारिता), कुवेत, साउदी अरब, नाइजेरिया
साइप्रस, मलेसिया, कतार,आबुधाबी (संयुक्त अरब इमिरेट्स), बंगलादेश, युरोपियन युनियन
दक्षिण कोरिया, ओमन, कुवेत, मलेसिया
अष्ट्रेलिया, बैंकक, पाकिस्तान, कतार
जापान (नारिता), माल्दिभ्स, आबुधाबी, युगान्डा
साउदी अरब, कुवेत
संयुक्त राज्य अमेरिका, साइप्रस/इजरायल
सरकारले गन्तव्य हेरी भाडादर निर्धारण गरेको छ। एयरलाइन्सहरूले चार्टर्ड उडान गरे पनि सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा लिन पाइने छैन।
नेपाल एयरलाइन्सलाई २४, हिमालयलाई १९ र अन्य विदेशी एयरलाइन्सलाई २४ उडानको जिम्मा दिने तयारी गरेको सरकारले तोकेको भाडादर यस्तो छ:
गतव्य भाडा(अमेरिकी डलरमा)
नयाँ दिल्ली २०५
चार्टर्ड उडानको नाममा ट्राभल एजेन्सीले अकुत पैसा असुल गरेको भन्दै यात्रुले तिर्नुपर्ने भाडादर नै तोकेको सरकारले टिकेटिङको व्यवस्थापन एयरलाइन्सले नै गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।
यात्रुको व्यवस्था भने नेपाल सरकारको कुटनीतिक नियोगले गर्नुपर्ने छ। कुनै पनि क्षेत्रमा न्यूनतम ८५ प्रतिशत यात्रु भएपछि मात्र एयरलाइन्सले चार्टर्ड उडान गर्ने छ।
नेपाल आउने यात्रुले पिसिआर तथा आरडिटी परीक्षणबाट नेगेटिभ रिजल्ट रहेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने छ। त्यस्तै नेपाल आएपछि सरकारको नियमअनुसार क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने छ।
काठमाडौ कोरोनाको हटस्पट, आज पनि ४४५ जनामा कोरोना पुष्टि
Posted on September 3, 2020 Author khabar silo
काठमाडौ । आज पनि कोरोनाको हटस्पट काठमाडौ नै बनेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा ४४५ जनामा कोरोना भाइरस भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं जिल्लामा ३५७, भक्तपुरमा ४२ र ललितपुरमा ४६ जना संक्रमित भेटिएका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा देशभरमा १२ सय २८ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य […]
झापाको मेचीनगरमा कोरोनाबाट एक महिलाको ज्यान गयो
Posted on October 28, 2020 October 28, 2020 Author khabar silo
झापाको मेचीनगर नगरपालिका वडा नं ६ काँकडभिट्टाकी ७९ वर्षीया महिलाको आज कोभिड –१९ को सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएको छ । बिर्तामोडस्थित बिएण्डसी हस्पिटलमा उपचारकै क्रममा आज बिहान ९ बजे उनको मृत्यु भएको थियो । श्वासप्रश्वासमा समस्या भएपछि उनलाई यसै साता बिर्तासिटी हस्पिटलमा उपचारका लागि भर्ना गरिएको वडाध्यक्ष ललित तामाङले बताए । निमोनिया सङ्क्रमण पत्तो लागेपछि उनलाई […]
टिकटक बनाउँदा प्रहरीको अनुमति लिनु पर्ने; नलिए कारबाही गर्ने चेतावनी(सूचना सहित)
Posted on October 8, 2020 Author khabar silo
नेपाल प्रहरीले अनुमति नलिएर प्रहरीको लोगो, पोसाक र दज्र्यानी चिह्न प्रयोग गरिए कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै विभिन्न चलचित्र, टेलिचलचित्र, टिकटक, सर्ट फिल्म, प्रायंक, सांगितिक भिडियोलगायत टेलिभिजन तथा स्टेज कार्यक्रमहरूमा नेपाल प्रहरीले प्रयोग गर्ने विभिन्न पोसाकहरूको दुरुपयोग भएको भन्दै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो।प्रहरीले प्रहरी प्रधान […]
दुई सिफ्टमा सरकारी कार्यालय खुलाउने तयारी, सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि व्यवसायीहरुसँग छलफल गरिने
उत्तर कोरियाको अमेरिकालाई चेतावनीः राष्ट्रपतिको चुनाव सामान्य होस् भन्ने चाहना छ भने चुप लागेर बस्नु
भाग्य न्यौपानेले यि सुन्दरीसँग गरेका रहेछन् सुटुक्क विबाह
शास्त्र अनुसार जान्नुहोस् कुन बार कुन काम गर्दा शुभ ?
१७ दिन हुँदा पनि किन उठेन सीताको शव, अनुसन्धानमा के गर्दैछ प्रहरी ?
खुल्यो अमेरिकामा प्रतिबन्ध, अब यस्ता नागरिकले अमेरिका प्रवेश पाइने